Shiinaha Cunto-siiyaha Tooska ah ee Shirkadda leh Saacad Dijitaar Dog Warshad-bixiyaha iyo soosaarayaasha ah. Ihome
Faahfaahinta alaabta: Miyaad ka walwalsan tahay sida loo quudiyo xayawaankaaga xayawaankaaga ah markaad guriga ka maqantahay? Kaliya maahan inay si otomaatig ah u waqti ku siin karto eeyahaaga laakiin sidoo kale waxay xakamayn kartaa qadarka cunnada eeyaha. Faa'iidooyinka ay leeyihiin quudiyayaasheena tooska ah ee cuntada xayawaanku: 1.Mawaadul: cabirka cuntada ABS ee kahortaga ayaa ka hortagi kara in xayawaannadaadu qaataan kiimiko sun ah ...
Miyaad ka walwalsan tahay sida loo quudiyo xayawaankaaga xayawaanka ah markaad guriga ka maqan tahay? .Ma aha oo kaliya in si otomaatig ah loo jaangooyo si loo quudiyo eeyahaaga laakiin sidoo kale waxay xakamayn kartaa qadarka cunugga cunidiisa.
Faa'iidooyinka ay leeyihiin quudiyayaasheena cuntada tooska ah u leh:
Maaddada: Cunnadda ABS ee heerka cuntada ayaa ka hortagi karta in xayawaankaagu ay qaataan kiimikooyin sun ah.
2.Design: saacad-sameeyaha waqti-go'an ayaa waqti siin kara si uu u quudiyo eeyahaaga, eeyaha u daa inay caado ka dhigtaan inay si joogto ah wax u cunaan.Waxaan sidoo kale leenahay midab kala duwan oo aad adigu doorato.
3. Biyo-la’aan & Washable: maaddadeenna biyuhu waxay ka hortagi karaan in weelku ku qoyo candhuuftiisa candhuufteeda, maadaddani sidoo kale way fududahay in la nadiifiyo, kaliya waxay u baahan tahay masax tuwaal qoyan.
Quudinta otomaatiga ah ee xayawaanka guriga, goob caqli badan oo cunno badan loogu talagalay xayawaanka, ka hortagga eeyaha iyo bisaduhu inay wax badan cunaan hal mar.
Cunto siiyaha otomaatiga ah ee otomaatiga ah wuxuu ku shaqeeyaa baytariyada, wuxuu kaloo kuu sahlayaa adiga markaad guriga ka maqantahay. Markaad maqnaato, ka dibna waad la socon kartaa oo aad maamuli kartaa cuntada xayawaankaaga maalin kasta. Joogto ah Deji waqtiga - Tirada cuntada - Waqtiga & miisaanka cuntada. Daboolka la saari karo iyo saxanka cuntada ee quudiyaha caqliga leh dhammaantood waa la dhaqi karaa. Waad dejin kartaa oo ku maydhan kartaa biyaha. Qaybaha kalena waa la nadiifin karaa. Dusha sare ee jilicsan ma daayo wasakhda. Way fududahay in la nadiifiyo.
Saxanno cunto oo madax bannaan, waxaad dejin kartaa 6 jeer oo quudin ah oo aad u diiwaan gelin kartaa eeyaha.
2.Waxaa lagu dhisay bandhig, makarafoon, sameecad iyo saacad, taasoo u oggolaanaysa milkiilaha inuu si fudud u dejiyo 4 jeer oo quudin oo kala duwan.
3. Waqtiga jadwalka ee jadwalka ah, wuxuu si toos ah u dheelidoonaa seddex cajaladood oo 8 ilbiriqsi ah oo shakhsi ahaaneed ah si loo xasuusiyo eeyga inuu cuno.
Waxyaabaha: caaga ABS
Awood: 4x R14-C Baytariyada (kuma jiraan)
Cabir: 33cmx9cm / Awoodda cuntada waa qiyaastii 330ml, wadar ahaan 6 cunno
Miisaanka alaabta: 1450g / 3.19lb
Iskiis u shaqeynaya quudinta cuntada xayawaanka,
Timesd dadka quudiya cunnada eyga,
Baaquli quudinta xayawaanka tirada,
Dijital saacadaha bisadaha quudiya,
Xayawaan rabaayada lagama maarmaanka u ah safarka ganacsiga,
Baaquli quudinta xayawaanka aan gacmaha lahayn,
Quudinta xayawaanka tooska ah ugu fiican
Hore: Dhalo Ey Laabi Laabi Karo Oo Dhalo Cuntada Weelka Cuntada ah
Xiga: Tallaabada Xaydha Eeyaha Xayawaanka Biyaha ee Beer Biyoodka
Safarka Bag Waayo Dog Gear Dog ...
Black Dog Bowl Butros Safarka B ...
Butros Isha Eyga Biyaha Spri ...
Interactive Dog Bowl Anti C ...
Xayawaanka Safarka ee Safarka Portab ...
Dog Bowl Bowl la qaadan karo ...